Qiimaha iyo helitaanka Nokia 8 Sirocco ee Spain | Androidsis
Tan iyo markii HMD ay liisanka ka heshay Nokia si ay ula tacaasho dib-ugu-dhalashada shirkadda Finish-ka adduunka ee taleefanka, shirkaddu waxay suuqa ka bilowday moodallo kala duwan moodooyinka dhammaan dhadhanka iyo jeebabka. Intii lagu gudajiray Shirweynihii Dunida ee Moobaylka, HMD iyo Nokia waxay suuqa kusoo bandhigeen dhowr nooc.
Terminal-dhamaadka-sare ee ay shirkaddu rabto inay beddel u noqoto Samsung iyo Apple waa Nokia 8 Sirocco, oo ah terminal waxaa laga heli karaa El Corte Ingles qiimo ahaan 799 euro, qiime xoogaa sare ah iyada oo la tixgelinayo qeexitaanka saldhigga.
Terminalkani wuxuu la yimaadaa Android One, markaa waxay noqon doontaa mid ka mid ah terminaallada ugu horreeya ee la cusbooneysiiyo mar kasta oo Google ay soo saarto nooc cusub oo Android ah Midka kaliya laakiin aan heli karno waa processor-ka Maaha tan ugu casrisan ee hadda Qualcomm na siiso, maaddaama ay tahay Snapdragon 835. Qeybta kale ee terminalku waxay na siisaa qeexitaanno aad u fiican.
Shaashadda Nokia 8 Sirocco waa 5,5 inji Super AMOLED oo leh xalka QHD (2.880 x 1.440) oo leh saamiga 18: 9. Gudaha waxaan ka helnaa Snapdragon 835 oo ay weheliso 6 GB oo RAM ah, Android 8.0 Oreo iyo 128 GB oo ah keyd gudaha ah.
Kaamirada dambe ee terminal-ka waxay ka kooban tahay laba lenses, 12 iyo 13 mpx siday u kala horreeyaan oo leh ZEISS optics, halka kan hore yahay 5 mpx. Batariga wuxuu leeyahay awood dhan 3.260 mAh la jaan qaadi kara wireless, waxay leedahay akhriska faraha ee shaashadda gadaasheeda, USB Type C isku xirka waxayna u adkeysaneysaa boodhka iyo biyaha iyadoo ay ugu wacan tahay shahaadada IP 67.
Daahfurka Nokia 8 Sirocco waxaa laga yaabaa inay ku timid waqti xun, maadaama ay ahayd hal maalin oo keliya tan iyo markii OnePlus 6, terminal leh astaamo ka wanaagsan Nokia 8 Sirocco iyo ku dhowaad 300 euro oo ka raqiisan qaabka HMD.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Qiimaha iyo helitaanka Nokia 8 Sirocco ee Spain